Garsoore Cabdiqawi oo ka hadlay dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya - BBC News Somali
15 Febraayo 2018
Xigashada Sawirka, ICJ
Gudoomiyaha cusub ee Maxkamada Caalamiga ah ee Caddaaladda
Madaxweynaha dhawaanta loo doortay maxmadda caddaalada adduunka ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dacwada la xiriirta muranka badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya.
Wariyaha BBC-da Bashiir Maxamed Caato oo weeydiiyay xaakimka bal sida ay u saamaynayso dacwadda maadaamaa uu isagu yahay nin Soomaali ah ayaa waxa uu kaga jawaabay "Dhalashada xaakimka iyo ka qeybgalkiisa dacwooyinka shaqo iskuma lahan, xaakimada maxkamadda waxaa loo doortaa in dacwooyinka yimaada oo idil uu xukun iyo go'aan ka gaaro , marka sidaasi daraadeed dacwad kasta xaakimadda waa ay ka qeybgalaan".
Nin sun ku dhex cabay maxkamadda adduunka
Haweenaydii adduunka ugu taajirsanayd oo geeriyootay
Madaxweyne hore oo xabsiga ka soo dhex maamulaya doorashada Liberia
Wuxuu intaasi ku daray "mana ahan haddii xaakimkan waddankiisu dacwad keeno in uu dacwadaasi isaga ka boxo haddaysan jirin sabab gaar ah sida in uu isaga wax kasoo abaabulay dacwada".
Garsoore Cabdiqawi oo ah qofkii Soomaali ah oo ugu horeeyay oo heerkaas ka gaaray nidaamka garsoorka adduunka ayaa sidoo kale sheegay in uu jecelyahay in aqoontiisa iyo waayo aragnimadiisa uu uga faa'iideeyo dalka Soomaaliya, haddii duruufaha u ogolaadaan.
Shaqaale maqaayad oo xabsiga loo taxaabay kadib markii booliiska ay siin waayeen cunto bilaash ah